I-COVID-19 Delta eyahlukileyo ejikeleza umhlaba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » I-COVID-19 Delta eyahlukileyo ejikeleza umhlaba
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba zaseMzantsi Korea • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukwesaba ukwahluka kwe-COVID-19
Yiya kwindawo apho ukugonywa kungaphakamanga kangako, kwaye kunokwenzeka ukuba ujonge indawo apho i-COVID-19 Delta Variant ikhulisa khona intloko yayo embi kwaye ibangele ukonyuka kwamatyala e-coronavirus kwakhona.
Ingxaki kwangoko nge-Delta Variant kukuba iyosulela kakhulu.
Okwangoku, umahluko uyaqhubeka nge-Asiya kule veki.
E-Australia nase-South Korea, usulelo olwahlukileyo lubetha amanani erekhodi amanye amazwe ukuze aqinise iiprothokholi kwakhona ngelixa ebongoza abemi ukuba bagonywe.
I-COVID-19 Delta Variant yafunyanwa okokuqala e-India ngo-Disemba ka-2020. Kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo, isasazeke kumazwe ali-100. Kutshanje, uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ulumkise ukuba okwahlukileyo kungekudala kunokuba yeyona nto iphambili kwi-coronavirus.
Kwiphondo laseNew South Wales, e-Australia, ukunyuka kweyona mihla mihla kumatyala amatsha ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka kuye kwaxelwa. Ukuqhambuka kwamva nje kuye kwangaphezulu kwama-200 uninzi lwala matyala abangelwa Ukwahluka kweDelta. ISydney, ekhayeni kwisihlanu sabantu abakwizigidi ezingama-25 zelizwe, ikwisiqingatha sokudlula kwisithuba seeveki ezimbini zokuthintela uqhambuko, olothuse abasemagunyeni phakathi kohambo lokugonya elizweni lonke.
I-Australia, njengamanye amazwe aliqela e-Asiya, izabalazile ukuhlalisa abantu njengempumelelo yokuqala yokuqulatha ubhubhane ikhokelele ekuthandabuza isitofu, kwaye abavelisi bacotha ukuthumela iidosi. I-Australia iye yagonya ngokupheleleyo iipesenti ezi-6 zabemi, ngelixa i-Japan iye yagonya iipesenti ezili-12.
Ngee-Olimpiki zasehlotyeni kule nyanga eJapan, i-Delta Variant isitha imidlalo. Ngokweengxelo, phantse isinye kwisithathu sawo onke amatyala kwimpuma yeJapan avela kokwahlukileyo kwaye anokufikelela kwiipesenti ezingama-50 phakathi kule nyanga. I-Tokyo kunye ne-prefectures ezintathu ezikufutshane bazifumana zikwimeko engxamisekileyo ngonyuselo lwamva nje losulelo lwe-coronavirus. Urhuluneli waseTokyo u-Yuriko Koike uthe kunokwenzeka ukuba kuthintelwe ababukeli abazimase iMidlalo yeOlimpiki ecwangciselwe ukuqala nge-23 kaJulayi ukuba inani lamatyala liyaqhubeka nokunyuka.
Kwezinye iindawo zaseAsia
In Thayilendi Ngokukodwa ePhuket, le ndawo ithandwayo yabakhenkethi ivulelwe abagonyi abagonywe ngokupheleleyo. Okwangoku iAlpha Variant eyaxelwa okokuqala e-UK iseyeyona nto iphambili eThailand. Nangona kunjalo, abasemagunyeni baseThailand bathe balindele ukuba i-Delta Variant izakuthatha indawo njengelona tyala liphezulu kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. I-Thailand ibone ukuba lusuku lwesithathu ngokulandelelana lokufa kwabantu ngenxa ye-COVID-19. Okwangoku, iThailandon ngolwe-Sihlanu uxele usuku lwesithathu oluchanekileyo lokufa kwe-coronavirus. Ukwahluka kweAlfa, eqale yafunyanwa eUnited Kingdom, iseyeyona nto iphambili kweli lizwe, nangona abasemagunyeni besithi balindele ukuba ukwahluka kweDelta kulawule kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
In emaznstie ekorea, Iimeko ze-coronavirus zigqibe i-800 izolo, elona liphezulu phantse kwiinyanga ezi-6. Inani eliqhelekileyo lokosuleleka elizweni likhuphukile kwiintsuku ezili-10 ezidlulileyo, kwaye abasemagunyeni eSeoul baye balibazisa iindlela zokuhlaziya ezoluntu. Ilizwe kuphela linenqanaba lokugonya ukuza kuthi ga ngoku phantsi kweepesenti ezili-10.
In Indoneshiya, amanyathelo kaxakeka aqale namhlanje ngenxa yesipikha kumatyala e-COVID-19 ngamanyathelo ekulindeleke ukuba ahlale endaweni ubuncinci kude kube nguJulayi 20.
In Indiya , urhulumente ugxile kubunzima iigonya Ukuphendula kunyuko olukhulu lwamatyala kunye nokusweleka ngoMeyi nangoJuni.
Ukunyuka kwamatyala amatsha eYurophu kubeka ukhenketho lwasehlotyeni phantsi kwelifu elimnyama ngaphandle kokumiliselwa kwesatifikethi sokuhamba se-European Union se-COVID-19 ebesinethemba lokuba siyakukhuthaza umsebenzi wokuhamba. I-Bhritane ikwangqina ngamatyala amaninzi e-Delta Variant, kodwa ngaphandle koku, ilizwe liceba ukuthintela ubomi ukuqala ngoJulayi 19. IJamani ithe izolo ilindele okwahlukileyo ukuphendula ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zamatyala amatsha kule nyanga. EPortugal, kumiselwe ixesha lokufika ebusuku.
I-United States ikwabonile ukunyuka kwe-Delta Variant usulelo kwiindawo zelizwe apho amazinga okugonya ahlala esezantsi. Umongameli wase-US u-Biden uthe izolo urhulumente uzakuthumela uncedo olukhethekileyo kulawo mathuba ashushu okonyuka kokosuleleka.